Disadisa ao amin'ny Metm : Nampiaka-peo ireo nanorina ny Fiangonana -
AccueilSongandinaDisadisa ao amin’ny Metm : Nampiaka-peo ireo nanorina ny Fiangonana
Disadisa ao amin’ny Metm : Nampiaka-peo ireo nanorina ny Fiangonana
22/03/2018 admintriatra Songandina 0
Amin’izao ankatoky ny andron’ny Paska izao dia niangavy ny fitondram-panjakana ireo taranaky ny nanorina ny Fiangonana Metm mba hisokafan’ny renim-piangonana etsy Antohomadinika. « Tsy tokony hanao politika ny Fiangonana na hidirana politika ny Fiangonana”, hoy Dr Rakotobe Andriamaro Andriatsirombaka, izay taranaky ny nanangana ny Fiangonana Metm teto Madagasikara. Nampiaka-peo izy ireo nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, teny amin’ny Carlton omaly satria nibirioka amin’ny lalana tsy tokony ho izy ireo mpitantana ao amin’ny foibe. “Betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra miseho amin’izao fotoana izao na eo amin’ny fitondran-tena, na ny tsy fanarahana fitsipika, na ny tsy fahamarinana misy amin’ny fitantanana”. Betsaka ny tsy fanarahana fitsipika.
Nambarany tamin’izany ohatra fa “raha misy ny olana ao anatin’ny fitandremana iray dia ny mpandray fanasan’ny tompo no tompon’andraikitra voalohany. Raha tsy tanteraka ny famahana izany dia miakatra amin’ny Sinodam-paritany, ary raha tsy vita ao vao miakatra komity foibe, ary rehefa tsy vitan’ny komity foibe dia miakatra amin’ilay rafitra hoe fitsaram-piangonana. Tsy tonga tany amin’ny fitsaram-piangonana anefa ny raharaha fa tonga dia nataon’izy ireo tany amin’ny fitsarana Anosy”. Eo amin’ny resaka fitantanana dia mampametra-panontaniana azy ireo ny hoe “nankaiza ny vola nangonina saika hananganana ny radio Metm, ny fanangonam-bola hanorenana fianarana ho an’ny Paramed tany Ihosy hankalazana ny faha-60 taonan’ny Metm satria na ny fototra aza tsy nijoro, ny fiarakodian’ny Metm izay tsy fantatra intsony ny nalehany. Rehefa hanontaniana ny mpitam-bola dia milaza fa izaho dia tsy mitana vola intsony fa efa ilay raikalahy iry no mitazona ny vola”. Heverin’izy ireo fa tena fanalam-baraka ny fiangonana ihany ny zavatra ataon’ny foibe. Koa niangavy izy ireo ny mba hanokafana ny Fiangonana amin’izao ankatoky ny Paska izao mba tsy ho eny an-tokontany ny mpino no hitsena ny andro Paska.
Saraha Rabeharisoa Hamaly ny hetahetam-pon’ny vahoaka Samy manao izay ho afany avokoa ireo kandidà ho Filoham-pirenena amin’izao fotoana anatin’ny fampielezan-kevitra izao. Anisan’izany ny kandidà avy amin’ny antoko PLD, Saraha Rabeharisoa, laharana faha-9 ao amin’ny bileta ...Tohiny